Ny Redmi Note 7 dia mivarotra singa iray tapitrisa amin'ny volana voalohany | Androidsis
Ny Redmi Note 7 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny iray volana
Redmi no marika vaovao an'i Xiaomi. Tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona dia efa namela antsika finday roa finday ny marika. Amin'ny lafiny iray dia natolotr'izy ireo ny Redmi Note 7, ny sainam-pirenena ankehitriny ary fotoana fohy taorian'ny nandaozanay anay an'i Go, ny maodely voalohany manana Android Go toy ny rafitra miasa amin'ny marika. Ny voalohany amin'ireo maodely roa dia ny telefaona antenain'izy ireo mafy.
Ka hatramin'ny voalohany dia antenaina ho tsara ny varotra, efa nomanin'izy ireo aza ny tahiry. Toa tsy latsaky ny iray volana amidy dia azo lazaina izany ity Redmi Note 7 ity dia mandray tsara eny an-tsena. Satria efa nahatratra singa iray tapitrisa namidy izy ireo.
Natomboka teny an-tsena tany Chine ny telefaona tamin'ny 15 Janoary. Iray volana latsaka taty aoriana, tamin'ny 11 febroary, voamarina fa ny Redmi Note 7 dia nahatratra singa iray tapitrisa amidy any China. Izay manazava fa ity karazana maodely ity dia manohy mankafy ny lazan'ny mpanjifa eto amin'ny firenena.
Ankoatry ny fiheverana zavatra tsara fanombohana ny traikefa nahafantarana ny marika sinoa ho marika mahaleo tena. Tsy tokony hahagaga raha averina amin'ny tsena vaovao dia hanana varotra tsara. Angamba any amin'ny tsena toa an'i India, izay Xiaomi no iray amin'ireo malaza indrindra, dia hisy vokatra tsara.
Fa amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe rahoviana no hanomboka amin'ny tsena vaovao ity Redmi Note 7 ity. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ihany ny mividy an'ity smartphone ity amin'ny fomba ofisialy any Shina. Raha toa ka mikasa ny hanitatra any Eropa ny marika. Zavatra tokony hitranga tsy ho ela, fa amin'ny mbola misy dia tsy misy daty.
Raha fintinina, ny Redmi Note 7 dia manomboka ny diany amin'ny tsena ankavanana. Azo antoka fa ho avo kokoa ireo varotra any Sina ireo satria mampitombo ny tahiry misy ny marika. Ho hitantsika amin'izay ny fivoaran'ny varotrao. Manantena ihany koa izahay ny hahafantatra ny ora hamoahana azy io tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Redmi Note 7 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny iray volana
Ny sary voalohany amin'ny interface Galaxy Watch Active sy ny Galaxy Buds vaovao dia voasivana
Voamarina: Apex Legends dia hanomboka amin'ny Android ihany koa